Iingcebiso malunga ne-eyebrow eyindoda | Amadoda aQinisekileyo
Amashiya angaphezulu kwesithintelo esithintela ukubila okanye amanzi ekufikeleleni emehlweni ethu. Amashiya amise amehlo ethu kwaye anike ubuso ebusweni. Ishiya elenziweyo linokuqinisa inkangeleko yakho, ngelixa ungazinxiba ngokungakhathali zinokuvelisa imvakalelo engathandekiyo. Ngaphambi kokuqala nge iingcebiso nge-eyebrow waxing, jonga ezi iingcebiso ngokuthambisa ngaphandle kobuhlungu.
1 Iziseko ezili-10 xa kuziwa ekukheni amashiya akho
2 Anjani amashiya akho?
Iziseko ezili-10 xa kuziwa ekukheni amashiya akho
Amashiya akho ayingowomfazi, kwaye uyikhumbule ngoonobumba abakhulu. I-arch yamashiya akho akufuneki iphawulwe, kufuneka ithambe ukuze inganiki uvakalelo lokuba yi-super waxed.
Ngaphambi kokuba uqale ukuthambisa Kuya kufuneka ucace malunga nokuba zeziphi iindawo ekufuneka zingabinazinwele kwaye zeziphi ezinokuba neenwele ngaphandle kwengxaki.
Kufuneka hlonipha ukutyeba kunye nokumila kweshiya. ngokuthambisa sizama ukuphucula amashiya ethu, singatshintshi.
Ngaphandle kokuba kuyimfuneko kakhulu, Sukuyikha phezulu intshontsho, kuba sisiphumo sobufazi kakhulu. Ungasusa ezinye iinwele ezingalawulekiyo ezingekho ndawo, kodwa into yakhe kukuhlasela amabrowbrow kunye nongezantsi leshiya.
Ishiya lendalo lihle ngakumbi nangona ibusy, kunokuba ishiya kakhulu isuswe. Ukuba sihamba ngokuthambisa, isiphumo esingeyonyani siya kuhlala, kwaye endaweni yokunika amandla emehlweni ethu, amashiya aya kuba sisiseko sobuso bethu.
Ngelixa uphinda ubamba amashiya, kulungile ukuba uye kuzo ukuzoba ngepensile yamashiya okanye ukumakisha ngepetroleum jelly, Ukuqinisekisa ukuba ufumana isiphumo osifunayo.
Xa ugqibile, faka ibhola yomqhaphu nge I-tonic yesikhumba esibuhlungu okanye usebenzise ikrimu enealoe vera kwindawo ukuyizolisa.
Ukuze ipore ivule ngakumbi, kwaye ishiya ilunge ngakumbi, Kuyacetyiswa ukuba ubachebe emva kokuhlamba.
Ukugcuma, into engaziwayo: Phambi kokuba uqalise ukuthambisa, jonga kakuhle kwiibronze ngoncedo lwesipili esikhulayo.Ngokuthambisa, qala ukususa ezo nwele ziphakathi kwamashiya amabini. Qala ngomgca osuka empumlweni uye ebunzi, kulapho iinwele ziqokelela khona kakhulu. Emva kokuba ususile loo nxalenye, hamba ususe iinwele de ufike kwincam ye-arch yangaphakathi yeshiya.
Recuerda que kubalulekile ukuba uphonononge amashiya akho kanye ngeveki ukuze bagqibelele.
Anjani amashiya akho?
Ukuba amashiya akho asondelelene kakhulu, kuyakubonakala ngathi amehlo akho amanyene kakhulu. Kuphephe ukuwaxwaya amabrawuza, kodwa ungagqithisi ekususeni nasekususeni iinwele.
Ukuba amashiya akho athe nkqo, kwaye wenze ubuso bakho bungabikho ntetho, ubuqhetseba obugqwesileyo kukukrola amashiya esenza i-arch encinci, engaphawulwanga kakhulu kwaye enotyekelo oluthambileyo, uhlala usezantsi kumashiya ukufezekisa ukujonga okucacileyo.
Ukuba amashiya akho arched kakhulu, ngokuqinisekileyo bakwenza ubonakale ngathi uhlala unomsindo. Thambisa isiphumo sayo ngokususa incam ye-arch kwaye ulungise iziphelo zamashiya.
Ukuba amashiya akho enza intetho yakho ibuhlungu ngenxa yokuba ethe nca ngamehlo, thwebula ishiya esiwela phantsi.
Kule vidiyo ungabona ukuba ungayifumana njani imilo yamashiya akho ukuze wazi ukuba ungaqala ngaphi ukukha.
Khumbula ukuba kubalulekile ukuba iziphumo zendalo kwaye idityaniswa kakuhle neempawu zobuso bakho. Ngaba unawo amaqhinga xa kufikwa kumba wokuncothula amashiya akho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Iingcebiso malunga ne-eyebrow waxing waxing
wynsh EN sitsho
Amakhwenkwe anamhlanje athatha amashiya ngaphezu kwamantombazana!
Phendula kwi-wynsh ES
Yiba Iña sitsho
Akufuneki unike iingcebiso malunga nokutshixwa kwamashiya, kuba loo klasi incinci kakhulu. Akukho njongo zokona, kodwa ndibona yonke into endiyamkelayo- - - - - -
Phendula Ube Iña
URodrigo González Alegre sitsho
Ukutshixwa kwamashiya eyindoda yenye yezona zinto zibakhathaza kakhulu abantu besilisa, kuyafana na Owu ndoda, uyawancothula amashiya akho! Ungumfazi! 😀
Phendula uRodrigo González Alegre
Yiba neklasi sitsho
Ingxaki kuxa abantu bephuma ezandleni ngokuthambisa. Kodwa amashiya atyhulwe kakuhle akufuneki abonise ukuba akhiwe.
Phendula ukuba ube neklasi
U-Ivan Alfonso Rojas Martinez sitsho
Kulungile kakhulu ngegalelo kodwa ingxaki kukuba abantu baseMexico bathambekele ekuboneni umntu echetyiwe kwaye eyilelwe uyisitabane
Phendula u-Ivan Alfonso Rojas Martinez
Ifashoni yeebhulukhwe eneephedi zedolo ibuyile
Impahla yangaphantsi ebomvu ebomvu yoNyaka oMtsha uEva